Waldaan misooma Oromiyaa sagantaa ashaaraa magariisaa ganna bara 2014’f lafa hektaara kuma 6 irratti boolla biqiltuu fi dagaa qopheesse – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Waldaan misooma Oromiyaa sagantaa ashaaraa magariisaa ganna bara 2014’f lafa hektaara kuma 6 irratti boolla biqiltuu fi dagaa qopheesse
On May 25, 2022 37
Finfinnee, Caamsaa 17, 2014 (FBC) – Waldaan misooma Oromiyaa sagantaa ashaaraa magariisaa ganna bara 2014’f lafa hektaara kuma 6 irratti boolla biqiltuu fi dagaa qopheesseera.
Waldichi aanaa Sabbataa Hawaas gaara Dabal irratti dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa bara 2014’f boollaa fi daagaa lafa heektaara kuma 6 irratti qopheessuu Itti Gaafatamaan Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Addaa Naannawa Finfinnee obbo Taakkala Amanuu himaniiru.
Naannawichatti muuxxannoo qonnaan bultoota godina Harargee irraa argameen daagaa hidhuun bara kana kan egalame ta’u eeruun, lafa heektaara kuma 6 irratti ganna dhufu biqiltuu gosa garaagaraa dhaabuuf qophiin eegalamuu ibsaniiru.
Hawaasni qophii boollaa kanarratti hirmaatan biqiltuu kanaan dura dhaabbamaniin jijjiirrama dhufe arguun kaka’umsa itti horuu ibsaniiru.
Ganna bara 2014 biqiltuu miliyoona shanii ol paarkiiwwan godinaalee fi aanaalee garaagaraa waldichi qabu 51 keessatti biqiltuu dhaabamuuf qophiin boollaa jalqabamuu Daayreektarri Waldichaa obbo Dajanee Itichaa himaniiru.
Biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taanee hawaasni misooma Kannisaa fi gabbisa looniin bosona irraa akka fayyadamuuf ni hojjatama jedhaniru.
Muluu Waaqshuumeetu gabaase.
Meeshaalee bu’uuraa fayyadamtootaaf qixa sirriin qaqqabsiisuu dhabuun seeraan…
Meeshaalee bu’uuraa fayyadamtootaaf qixa sirriin…
Oduu biyya keessaa14539